Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » | » Ndị njem nlegharị anya China na-alọghachi? E weputara akụkọ isi okwu
| • Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa ozi China • Akụkọ kacha ọhụrụ na Hong Kong • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa Taiwan • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ndị njem China dị njikere ma na -atụkwa ụjọ ife ọzọ.
Ụlọ akwụkwọ na-ahụ maka njem nlegharị anya nke China weputara "Akuko kwa afọ na mmepe njem nlegharị anya nke China 2021."
Ọ bụ Dr. Jingsong Yang, onye isi ụlọ ọrụ Institute of International Studies (Hong Kong, Macao na Taiwan Research Institute) wepụtara akụkọ ahụ.
N'afọ 2020, njem nlegharị anya nke China na-apụ apụ ruru nde 20.334, mbelata nke 86.9% ma e jiri ya tụnyere 2019. N'ọnwa Febụwarị 2020, ọnụ ọgụgụ njem ọpụpụ gbadara nke ukwuu ruo ihe na-erughị 600,000 site na ihe karịrị nde 10 na Jenụwarị. Njegharị otu ndị a na-apụ apụ bịara akwụsị kpamkpam. A na-atụ anya njem nlegharị anya na-apụ apụ maka 2021 ga-eru nde 25.62, mmụba nke 27% site na 2020. Tụnyere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ihe karịrị 100 nde ndị njem na-apụ tupu ọrịa a, njem nlegharị anya nke China na-anọgide na-akwụsị.
Eshia gara n'ihu bụrụ ebe kachasị elu yana ndị njem China na-eleta 95.45%, Europe, America, Oceania na Africa sochiri ya. N'ozuzu, njem na kọntinent ndị ahụ gbadara site na 70% ruo 95%, ebe Eshia na-ewere ntakịrị mbelata na Oceania bụ mbelata kasị ukwuu. Hong Kong SAR, Macao SAR, na Chinese Taipei ka bụ ebe ndị a kacha eleta, na-aza ihe karịrị 80% nke nleta.
Ebe 15 kacha elu bụ Macau SAR, Hong Kong SAR, Vietnam, South Korea, Japan, Thailand, Cambodia, US, Singapore, Chinese Taipei, Malaysia, UK, Australia, Canada na Indonesia, yana mbelata sitere na 66% ruo 98% Njem na Macau SAR gosiri mgbake doro anya.
Nnyocha ahụ na-egosi na nchekwa, oge dị mkpirikpi, na mkpakọrịta bụ isi ihe maka njem ọpụpụ. 82.8% nke ndị zara ajụjụ ga-aga ebe ebe ọrịa COVID na-enweghịzi. Ndị na-aza ajụjụ na-enwe mmasị karị ịzenarị ebe ndị mmadụ juru. 81.6% na-egosi na nwa oge, ha ga-ahọrọ maka njem ụlọ kama ịpụ njem. 71.7% na-ala azụ iji ụgbọ elu gaa mba ọzọ n'ihi ejighị n'aka ọrịa COVID.
Maka njem na-apụ apụ, ihe ka ọtụtụ n'ime ndị zara ajụjụ ga-adabere na mgbasa ozi mgbasa ozi na ebe nrụọrụ weebụ njem, naanị 25.08% ga-eji ndị na-ahụ maka njem nleta, nke na-egosi mbelata nke 37.79% ma e jiri ya tụnyere 2019. Ọtụtụ ndị zara ajụjụ na-ahọrọ "na-eme njem na ezinụlọ dum" na "na-eme njem na" ezinụlọ na-ele mmadụ anya n’ihu,” ma ole na ole họrọ “njem nanị ya” na “iso ndị bịara abịa mee njem.” N'ihe gbasara oge njem, ihe na-erughị 10% na-ahọrọ karịa ụbọchị 15 na karịa 60% atụmatụ maka ụbọchị 1 ruo 7, nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50% na-ahọrọ 4 ruo 7 ụbọchị.
Ọrịa na-efe efe zuru ụwa ọnụ ka na-emetụta njem nlegharị anya na-apụ apụ, ma ọnọdụ ụlọ nke mba ụwa na nke China ka na-akwụsighị ike. N'ọdịnihu, usoro nchịkwa ahụike ọha nwere ike bụrụ nke a na-ahazi, ndị njem nlegharị anya nke China ga-achọ nchekwa na nchekwa ahụike ka mma. Ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke na-apụ apụ na-eme ka ọ dị ọhụrụ site na mmepụta nkà na ụzụ na nkwalite, gụnyere ịgba ọgwụ mgbochi, ule PCR ngwa ngwa, koodu ahụike dijitalụ, wdg. Ọzọkwa, 5G, Big Data, AI, wdg, na-ejikọta ya na omume ụlọ ọrụ njem nlegharị anya. nke ga-enyere aka njem nlegharị anya na-apụ apụ n'ọdịnihu.
Akụkọ ahụ na-ekwu na ụmụ amaala China ka nwere ọchịchọ maka njem ọpụpụ, nke ọnụ ọgụgụ buru ibu na-akwado, ime obodo, na ọnọdụ akụ na ụba ka mma. Akụkọ ahụ nwekwara ngalaba na-akọwapụta mbọ / ihe ọhụrụ nke ụlọ ọrụ na-agbanwe site na njem nlegharị anya na-apụ apụ gaa na njem nlegharị anya ụlọ iji gboo mkpa ahịa.
Akụkụ ikpeazụ nke akụkọ ahụ gụnyere nyocha dị mkpa nke echiche 2022.